Ganacsade ka badbaaday qarax gaarigiisa loogu xiray oo ka dhacay Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaGanacsade ka badbaaday qarax gaarigiisa loogu xiray oo ka dhacay Muqdisho
Gaariga oo qaraxa burburiyay. Sawirka: Radio Muqdisho.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Nin Ganacsade ah ayaa ka badbaaday qarax loogu xiray gaarigiisa oo ka dhacay degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho, sida ay sheegeen booliiska.
Taliyaha booliiska saldhiga degmada Waaberi ayaa warbaahinta u sheegay in ganacsadaha oo lagu magacaabo Xuseen Jaamici uu gaariga ka dagay kahor inta uusan qarxin.
Jaamici ayaa qaraxa waxaa kasoo gaaray dhaawac fudud, sida uu sheegay taliyaha booliiska, sidoo kalena waxaa dhaawac kasoo gaaray wiil yar oo baalashle ah.
Ma jirto cid sheegatay masuuliyada qaraxaas, balse waxaa la aaminsanyahay in ay tahay shaqada kooxda hubaysan ee Al-Shabaab.
July 2, 2016 Shiikh Muqdisho lagu dilay
July 8, 2016 Booliiska Soomaaliya oo qabtay labo nin oo looga shaki qabo al-Shabaab